Iindawo ezintsha eziphakamileyo zethailand zaseThailand
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uthutho » Iindawo ezintsha eziphakamileyo zethailand zaseThailand
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Utyalo mali • iindaba • Iindaba Eziphambili zaseThailand • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Agasti 23, 2017
Ukuhamba ngeBombardier kubhengeze iikhontrakthi ezi-2 zenkqubo yayo ye-Innovia Monorail 300 yeendlela ezi-2 zokuhamba ngokukhawuleza eThailand. Ukuhamba ngeBombardier izinze eBerlin.
Izivumelwano zikwiNyakatho Bangkok Monorail Co Ltd. (NBM) kunye neMpuma Bangkok Monorail Co Ltd. (EBM), oya kuba noxanduva lokwakha i-turnkey kunye neminyaka engama-30 yokunikezelwa kwemigca emitsha eya kuphucula hamba ngaphezulu kwama-400,000 abantu kunye neendwendwe yonke imihla.
Ikhontrakthi ne-NBM ichaphazela i-34.5 km Khae Rai-MinBuri (Pink) Line entsha eza kusebenza neeseti zoololiwe ezingama-42 kwaye ikhontrakthi ye-EBM ineetreyini ezingama-30 zomgaqo weLat Phrao-Samrong (Mthubi).
Izivumelwano zibandakanya ukubonelela ngolawulo lweprojekthi, iinkqubo zobunjineli kunye nokudityaniswa, ukuvavanywa, kunye nokugunyaziswa koololiwe abatsha kunye neenkqubo.
IBombardier iyakuyila kwaye ibonelele ngezixhobo zoomatshini kunye nezombane kwimizila emi-2 ye-monorail, kwaye iya kuzisa i-72 4-car INNOVIA Monorail oololiwe abangama-300 (iimoto ezingama-288) ezixhotyiswe ngetekhnoloji yokulawula uloliwe eyiBombardier Cityflo 650 ukuze isebenze ngaphandle komqhubi.
Oololiwe baya kwenziwa e-Bombardier ngokudibeneyo kwiPuzhen Bombardier Transportation Systems (PBTS) e-China, basebenza kunye neBombardier yeMveliso ye-Monorail kunye neeNgcali zezoBunjineli.
"Sisiganeko esibalulekileyo ngokwenene kwitekhnoloji yethu yokuhambahamba ngesantya esikhulu ukuba ikhethwe kule projekthi inombono yophuhliso lweedolophu eBangkok."
"IBombardier inceda iidolophu kwihlabathi liphela ukuba zijongane nemicimbi yazo yokuxinana kwaye ezi monorail zodumo ziya kuba longezo olubalulekileyo kwinethiwekhi yoololiwe abakhulayo eBangkok, ukubonelela ngohambo olukhawulezileyo nolukhawulezayo kumakhulu amawaka abakhweli mihla le," utshilo uRichard Hunter, uMongameli weZisombululo zoLawulo loThutho nakumazantsi mpuma eAsia kwezothutho lweBombardier. Inkqubo yethu ye-INNOVIA Monorail 300 engenaqhubi ibonelela ngokusebenza kwamandla, uyilo olucekeceke, indawo ebanzi yokuhamba kunye nokuhamba phakathi kweemoto ukhuseleko kunye nokhuseleko oluphuculweyo kunye namavili erabha yengxolo encinci kunye nokuhamba ngokugudileyo. Iyakwazi ukuphatha iirveve ezibukhali kunye neemeko ezinobunzima, ilungelelene neemfuno zomthamo omkhulu wekomkhulu laseThai. Ukuwohloka kweminyaka engama-20 siseThailand, sisiganeko esibalulekileyo kwitekhnoloji yethu yesitimela eyonyulelweyo ukulungiselela ezi projekthi zemibono yophuhliso lweedolophu eBangkok. ”
Ikhontrakthi ixabisa i-THB50 yezigidigidi (i-US $ 1.47 yezigidigidi) koololiwe abaza kusetyenziswa kwiindlela ezimbini ze-monorail.
Ukusebenza kwimimandla esemantla nasempuma yesixeko, ii-monorail ziya kudibana nenethiwekhi yothutho esele ikho kwaye ibaleke ngesantya ukuya kuthi ga kwi-80 km / h ngomthamo omkhulu wabakhweli abangaphezu kwe-28,000 ngeyure, kwicala ngalinye.
IKhabinethi yaseThailand yanikezela ngeekhontrakthi zemvumelwano ye-THB105 yezigidigidi (i-US $ 3 yezigidigidi) yeeprojekthi ezimbini ze-monorail ngaphambili kwi-2 km Pink Line kunye ne-34.5 km ye-Yellow Line kwi-BSR, intsebenziswano phakathi kwe-BTS Group Holding Plc eqhuba ii-BTS skytrains eBangkok. , Ubunjineli be-Sino-Thai kunye ne-Plc yoKwakha (i-STEC) kunye neRatchaburi yaMandla aMandla okuGcina iPlc (Ratch).
Umsebenzi wokwakha ungaqala kulo nyaka kwaye uza kuqala ukusebenza ngo-2020. U-Keeree Kanjanapas, Usihlalo we-BTS Group, ephethe i-75 pesenti ye-BSR Consortium, uthe, "Emva kokuba sivumile koololiwe kwaye wonke umhlaba uphononongwa, singaqala umsebenzi wokwakha, kulo nyaka. ”
Urhulumente wase-Thailand uzakufaka i-THB40 yezigidigidi kwimisebenzi yoluntu enxulumene nayo kwaye i-BSR iza kutyala i-THB60 yezigidi kulwakhiwo, ukusebenza koololiwe, kunye nolawulo kwiiprojekthi ezi-2 ezixabisa ngaphezulu kwe-THB100 yezigidigidi iyonke.
Iikhontrakthi zemigca emi-2 yahlulwe yangamanqanaba ama-2, elokuqala lelokwakha, eliza kuhlala iinyanga ezingama-39 ngelixa isigaba sesibini sisebenza, esiya kuhlala iminyaka engama-30.
Kwiindaba ezinxulumene noko, iBangkok imiselwe ukwazisa nge "Spider Card" yayo kulo nyaka. Inkqubo eqhelekileyo yamatikiti yeendlela ezahlukeneyo zothutho lukawonkewonke.
UPeraphon Thawornsupacharoen, uSekela Nobhala Wezothutho, uthe le nkqubo, ibizwa ngokuba yi-moom ephambili (isigcawu), ayizukusetyenziswa kuphela ziindlela ezi-4 zikaloliwe zombane kodwa nenkqubo yebhasi yedolophu eqhuba iibhasi ezingama-2,600 XNUMX esixekweni.
Ngoku abakhweli kufuneka bathenge amatikiti ahlukeneyo kwinkonzo kaloliwe nganye. Ikhadi lesigcawu liya kusebenza njengetikiti elinye ukwenza uhambo lube lula ngakumbi kubahambi nangabatyeleli baseBangkok.
Umnumzana uPeraphon uthe iinkqubo ze-4 zombane kaloliwe-i-BTS Skytrain, i-Airport Rail Link, i-Purple Line, kunye ne-Blue Line subway service-iya kuba yeyokuqala ukusebenzisa ikhadi elitsha.
Ngenxa yeenkampani ezahlukeneyo ezisebenza ngeendlela ezahlukeneyo zothutho kuya kuba nzima ukuzilungisa, ngeli xesha abakhweli kunye neendwendwe zikulungele ukuphuma kwazo ixesha elide.
Icandelo loMphathiswa Wezothutho likwathi intsebenziswano entsha phakathi kukarhulumente namashishini abucala iyafuneka ukuze kulawulwe ikhadi.